एमाले महाधिवेशनमा प्रचण्ड नजाने, नारायणकाजी सहभागी हुने
काठमाडौं, ९ मंसिर । नेकपा (एमाले) को १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी हुने भएका छन् । भोलिबाट सुरु हुने एमालेको १०औं महाधिवेशनमा अतिथि र वक्ताको रुपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बोलाईएको थियो । तर, माओवादी केन्द्रले भने अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा पनि नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टीको प्रतिनिधि बनाएर पठाउने […]
एमाले महाधिवेशन ‘पञ्चर्याली’ देख्ने माओवादीमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमै बन्देज !
काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गर्दैगर्दा नेकपा एमालेले मंसिरमा व्यापक रुपमा महाधिवेशन गर्‍याे।चितवनमा भएको महाधिवेशनमा एमालेले लाखौँको संख्यामा जनप्रदर्शनसमेत गर्न भ्यायाे। तर, सो महाधिवेशनलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले महाधिवेशनलाई पञ्चर्‍यालीको संज्ञा दिन भ्याए। एमाले महाधिवेशनबारे टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तपाईं हामीले एमाले नामको महाधिवेशन पनि देख्यौँ । मैले त पञ्चर्‍यालीभन
थाहा खबर 23 दिन पहिले
एमाले महाधिवेशन ‘पञ्चर्‍याली’हो त्यसैले मुलुकमा अझै प्रतिगमनको खतरा छः प्रचण्ड
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेको महाधिवेशन प्रतिक्रान्तिलाई बलियो बनाउन आयोजना गरिएको भए पनि त्यो प्रयास असफल भएको बताएका छन् ।
HamraKura 1 महिना पहिले
गृहजिल्लामै भएको एमाले महाधिवेशन उद्घाटनमा किन आएनन् प्रचण्ड ?
नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेको १०औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा अनुपस्थित भएका छन् । महाधिवेशन ठूलो पर्व भएकाले अन्य दलका शीर्ष नेता शुभकामना दिन जाने गर्छन् । प्रचण्ड भने एमालेको निम्ता पाएर पनि नगएका हुन् । एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई निम्तो नै गरेको थिएन । नेपालले एमाले विभाजन गरी केही महिनाअघि नयाँ पार्टी गठन गरेका हुन् । उनलाई नबोलाउने घोषणा एमालेले थियो तर दाहालले आतिथ्य किन अस्वीकार गरे ? प्रचण्डसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स...
एमाले महाधिवेशन : प्रचण्डले पठाए लीलामणि पोखरेल
एमालेको १० औं महाधिवेशनलाई शुभकामना दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट लीलामणि पोखरेल चितवन आइपुगेका छन् । एमालेले महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्य दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बोलाएको थियो । प्रचण्ड भने काभ्रेका दुईवटा पालिकामा हुने पार्टीको अधिवेशन उद्घाटनमा गएका छन् । आफु नजाने भएपछि उनले नेता पोखरेललाई पठाएका हुन् । पोखरेल चितवन आइसकेका छन् ।
९ मंसिर, चितवन । नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा शुभकामना दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नजाने भएका छन् । एमाले महाधिवेशन भोलि शुक्रबार चितवनमा शुरु हुँदैछ । उद्घाटन समारोहमा एमालेले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि बोलाएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका […]
एमाले महाधिवेशन उद्घाटनमा ‘प्रचण्ड’ नजाने
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ नजाने भएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डको सो दिन अन्तै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले जान नसक्ने माओवादी निकट स्रोतले बताएको छ। यद्यपि एमाले महाधिवेशनमा पार्टीबाट प्रतिनिधि भने पठाइने छ । यसबारे पार्टीमा छलफल भइरहेको छ । केही दिनअघि एमाले नेता […]
एमाले महाधिवेशन : देउवा जाने, प्रचण्ड अन्योलमा, नेपाललाई बहिष्कार
नेकपा एमालेको भोलि (१० मंसिर) हुने महाधिवेशन उद्घाटनमा शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चितवन जाने तय भएको छ । सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने अहिलेसम्म जाने नजाने टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् । महाधिवेशन उद्घाटनका दिन प्रचण्डको काभ्रे जाने कार्यक्रम तय भएको छ । दुईवटा गाउँपालिकामा यसअघि नै तय भएको पार्टीको पालिका अधिवेशनमा प्रमुख अतिथि भएर प्रचण्ड जाँदैछन् ।‘उहाँ (प्रचण्ड) महाभारत गाउँपालिका र खानीखोला